Chhaharaa | ब्राह्मणहरु विदेशी हुन् (RSS राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ भारतको स्पष्टोक्ति)
ब्राह्मणहरु विदेशी हुन् (RSS राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ भारतको स्पष्टोक्ति)
ब्राह्मण सदैवा दाँव–पेच बनाएर तरह तरहको षड्यन्त्र रचेर आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न माहिर हुन्छन् । माधव गोलबलकरले शंकरमढाचार्यलाई इ.सं. १५६४ डिसेम्बर २० मा पत्र लेखेर पठाएकी– “खास गरी जाति विशेष तथा वंशानुगत अछुतको विषय लिएर अपृय घटना निर्माण भयो त्यो सर्वविदितै छ, समाजको सुव्यवस्थित धारणाले समाजको सुगठित शक्ति सम्पन्न तथा सांसारिक प्रपञ्चबाट कल्याण प्राप्तिको लागि समर्थन गर्ने धर्मको केही रितीहरुमा र यस लक्ष्यको ध्यानमा राख्दै परिवर्तन गर्नको लागि नयाँ रीतिहरुको स्थापना गर्नको लागि अनावश्यक पुरानो या अहितकारी रीतिहरु छोडेर विगतकालमा आवश्यकता अनुसार पूर्व आचार्यहरुले परिवर्तन गरेका हुन् । पछि पनि देशकाल परिस्थिति सोचेर आवश्यक रीतिहरुको स्वीकार र अनावश्यक र अहितकार रीतिहरुको उपेक्षा गर्दे दृष्टिले उचित व्यवस्था गर्नुलाई तत्कालिन आचार्यहरु र धर्मगुरुहरुको अधिकारको लागि ऋषिहरुले स्पष्ट निर्देशन दिएको छन् ।” यसले यो सावित हुन्छ कि ब्राह्मण वर्ग दाँव–पेच रचेर नै षडयन्त्र गर्छन् । दाँव–पेचकै मार्फत ब्राह्मणहरुले “हिन्दू” शब्द स्वीकारेका हुन् ।
बाहिर बाहिर इस्लाम र इसाईलाई दोष लगाएर अनुसुचित जाति, जनजाति एवं ओबीसीहरुलाई ‘हिन्दू’को नाममा एकता गराउने कूटनीति रचेर नै संघले काम गरेको छ । अल्पसंख्यक ब्राह्मणहरु बहुसंख्यक समूहमाथि यसरी नै राज गर्दै आएका छन् । संघ परिवारले जब देशभरी वम विष्फोट गर्ने योजना बनायो उस समय यिनीहरुले जानीबुझि “अभिनव भारत” आतंकवादी संगठन जस्तै संगठनको निर्माण गर्यो । संगठन र संघबीच सम्बन्ध थिएन भने प्रज्ञा ठाकुरको मध्यप्रदेशबाट भाजपाको उमेदवार खडा गरि इभिएम घोयला गरेर जिताएर किन ल्याउथे ? सन् २००८ मा लेप्टिनेन्ट कर्नल प्रसाद पुरोहितले जुन गुप्त मिटिङ राखेको थियो उसको भिडियो रेकर्ड गरेर राखिएको थियो । जब महाराष्ट्र एटिएसले उसको ल्यापटब जफत गर्यो तब उसले ल्यापटपमा ४८ हिस्सा बनाएर(२४ भिडीओ र २४ अडियो) राखेको कुरा प्राप्त भयो । त्यहाबाट ४–५ हिस्साहरुको शब्दांकन गरेर उसलाई चार्जशिट सहित अदालतमा पेश गर्ने काम भयो । फरिदावादमा भएको “अभिनव भारत”को मिटिङमा संविधान विरोधी एवं देशद्रोही बहस भएको थियो त्यो यस प्रकारको छ ।
मौजुद भैरहेको राज्यघटनाको मेटाएर त्यसको बदलामा वेदहरु र स्मृतिहरुमा निर्धारित हिन्दू राष्ट्रको स्थापना गर्ने ।
१) We will fight the constitution, will fight the nation, this nation is not ours.(यो देश हाम्रो होइन, यसकारण यो देशको विरुद्ध, संविधानको विरुद्ध युद्ध गरिनेछ ।) प्रसाद पुरोहित,
२) We have to fight the constitution, we have to fight for our independence. (यस संविधानको विरुद्ध लड्नै पर्छ, हामी आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि लड्नै पर्छ ।) प्रसाद पुरोहित
३) यस संविधान मान्न जरुरी छैन, Knocking down जरुरी छ र यहि एक मात्र उपाय हो । प्रसाद पुरोहित
४) Thi constitution is not applicable to us, will not acceptable to us, another constitution will come into place, the Hindu Rastra is Stablised. (यो संविधान हाम्रो अनुकुल छैन, हाम्रो लागि स्वीकार योग्य छैन, दोस्रो संविधान यसको सट्टा बनिन्छ तब हिन्दू राष्ट्र स्थापित हुन्छ ।)
हिन्दू राष्ट्रको नयाँ राज्य घटनाको स्वरुपः
१) “राज्य व्यवस्था सम्बन्धी हामीसँग केही पौराणिक शास्त्रहरु छन् । हाम्रो जुन स्मृतिहरु छन् वही हाम्रो समाजको संविधान हो । यस समय १४ स्मृतिहरु छन् हाम्रो देशमा सबैको एकट्ठा
गरौं ।” सुधाकर द्विवेदी
२) “यस देशमा हामीहरुलाई वेदमा भने जस्तो सनातन हिन्दू धर्म, वैदिक धर्म नै चाहिन्छ ।” प्रसाद पुरोहित
यो सबै हुनको लागि अर्थात ब्राह्मणी राष्ट्र स्थापना गर्नको लागि प्रसाद पुरोहितले त्यो बैठकमा यो पनि भनेकी, नेपाल, इजरायलसँग सम्झौता भएको छ । इजरायलले त उसको चार शर्तहरु मानिसकेको छ ।
अभिनव र आरएसएसबीच गहिरो सम्बन्धः
१) “जेहोस् यो हाम्रो दुर्भाग्य हो की, उत्तराञ्चलमा जति नै कोसिस गरे पनि आज हाम्रो सरकार(भीजेपी सरकार) माओवादीको खुल्ला समर्थन गरीरहेछ । यो कुरा मैले संघका ठूला अधिकारीहरुसँग पनि गरे । माननीय मोहन भागवतजीसँग भेट गरे, दुई घण्टासम्म भेट गरेर बताए । त्यहाँको पुलिस चीफ सुभाष जोशीलाई भनेको थिए र दुई पटकसम्म भेट पनि गरेको थिए । हामीबीच बारम्बार कुरा भैरहन्छ ।” डा.आर.पी.सिंग
२) “(बैठकमा आएको व्यक्तिको परिचय गराउँदै) उहाँको परिचय बी.एच.शर्मा प्रेमसिंग जी । दुई पटक एम.पी.(बीजेपी), सन् १९४० बाट स्वयंसेवक, बहुत संघर्षमय जीवन अवतक बिताई रहनु भएको छ ।” प्रसाद पुरोहित
३) Various Political Government and non-government bodies will be infiltrated (विभिन्न राजनीतिक सरकार र गैर सरकारी संस्थाका सदस्यहरुबाट सूचना प्राप्त गरिनेछ) मतलब उदाहरणको लागि एक जना क्याप्टन या मेजर दिल्लीमा बसेको थियो दिल्लीभित्र काम गर्नको लागि र काम हुन तिन महिना लागेको थियो । त्यो काम एक फोन गर्दा भएको थियो किनकी उ संघको मान्छे थिया र म पनि संघकै मान्छे थिए । बिना जानेबुझे थाहा भयो की उ संघमा रहिसकेको व्यक्ति थियो । मैले उसलाई फोनमा यो काम गर्नपर्ने भयो । उ उत्तरप्रदेशको व्यक्ति थियो र भन्यो भइहाल्छ नी त्यसैले त्यो काम एक दिनभित्रमा भयो ।”
उक्त भनाईहरु त्यो मिटिङको शब्दांकनको पत्रहरु थियो । त्यो दस्ताबेज अदालतमा पेश गरिएको थियो । त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि अगाडि नै आईजी एस.एम. मुश्रिफबाट प्राप्त भैसकेको थियो । अभिनव भारत तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको आइएसआइ आतंकवादी संगठनसँग सम्बन्ध मात्र होइन बम विस्फोटको लागि आर्थिक सहायता पनि प्राप्त हुन्थ्यो भनेर असिमार्नहले स्वीकारोक्ति कबुल गरे ।
“मलाई यो पनि पत्ता लाग्यो की, सुनिल जोशी भारतभाईसँग नागपुरको इन्द्रेशजीसँग भेट गरे । इन्द्रेशजीले भारतभाईको सामुन्ने सुनिलको ५०,०००/- रुपैया दिएका थिए । कर्नल पुरोहितले एक पटक मलाई भनेका थिए की, इन्द्रेशजी आइएसआइका एजेन्ट हुन् र उनका सबै डकुमेन्ट कर्नल पुरोहितको साथमा छ । तर कर्नल पुरोहितले मलाई त्यो डकुमेन्ट कहिले देखाएनन् ।” यसबाट यही सावित हुन्छ की, इन्द्रेश कुमार, लेप्टिनेन्ट कर्नल प्रसाद पुरोहित तथा भगावतको आइएसआइ आतंकवादी संगठनसँग गहिरो सम्बन्ध छ । यस सन्दर्भमा अरु ठोस प्रमाण फरिदावादको बैठकमा नै डा.आर.पी.सिंग कबुल गर्छन की, हाम्रो मुक्ति च्यानलको काम जारी छ र यसको लागि केही पैसा लगानी भैरहेछ, त्यसको लागि अंडरवल्र्डको डन दाउदले पैसा दिएको छ । यसको के अर्थ हुन्छ ? मूलनिवासीहरुको राष्ट्र कब्जा गर्नको लागि बाहिरको देशबाट आतंकवादीसँग् सहयोग लिएर यो नयाँ आक्रमणको तयार त होइन ? ब्राह्मण विदेशी हो, पराय हो, आगन्तुक हो त्यसैले देशको विरुद्धमा काम गर्दैछन् । यसले यही सावित हुन्छ की २६ नोभेम्बरको हमलामा आरएसएसको सिधा सम्बन्ध थियो । पूर्व आइ.जी.मुश्रिफले सवुतहरुको साथ किताबमा लेखेका छन् । अजमेर शरिफ बम बिस्फोटमा आरएसएसको सदस्यहरुलाई अपराधी घोषित गरियो । जयपुरको नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी(एनआइए)को खास अदालतमा अजमेर दरगाह ब्लाष्टको बारेको मुद्दाको सुनुवाइमा ३ जनाको अपराधी घोषणा गरियो जो आरएसएससँग सिधा सम्बन्ध
राख्दथे । तिनीहरु हुन मावेश देवेन्द्र गुप्ता एवं संघको पूर्णकालिन कार्यकर्ता सुनि जोशी । सुनिललाई पछि संघकै सदस्यहरुले हत्या गरेको भनेर उनका परिवारले भन्ने गर्थे ।
लेप्टिनेन्ट कर्नल प्रसाद पुरोहितले फरिदावादको आफ्नो गुप्त बैठकहरुमा कबुल गरे की यो देश ब्राह्मणहरुको होइन त्यसैले राष्ट्र तथा संविधानको विरुद्धमा काम गर्न पर्छ । देशमा बम बिस्फोट गरेर संविधानको विरुद्धमा माहोल तयार गर्ने उसको एकमात्र उद्देश्य थियो । इण्डियन संविधान नष्ट गरेर संविधानको सट्टामा मनुस्मृतिको नै संविधान बनाउने उसको एजेण्डा थियो । हिन्दू राष्ट्र ओवीसी वर्गका समर्थन प्राप्त गर्नको लागि हो, असलमा वेदमा निर्भर वर्णाश्रम धर्म अर्थात वैदिक धर्मको पुर्नस्थापना गर्न वा ब्राह्मणहरुको देश इण्डियामा स्थापना गर्नु उसको मूल लक्ष्य थियो । त्यसैले उनीहरुको “हिन्दू राष्ट्रवाद”को पछाडि यही गोप्य लक्ष्य रहेको हाम्रो बुझाई हो ।
सन्दर्भ– प्रो.दिलास खरात
“विदेशी ब्राह्मणो की मातृभूमि युरोशिया”